Abavelisi beeMoto abaZodwa kunye nabaXhasi | I-China ekhethekileyo yeFektri yeZithuthi
I-China Daxlifter Super esezantsi yeProfayili yokuLayishwa kwePlatform
I-China Phakamisa Itheyibhile ye-E Imilo eyenziwe nguDaxlifter
Itheyibhile yokuPhakamisa iSkissor esemgangathweni
Itheyibhile yokuPhakamisa iskere esinye
Itheyibhile yokuPhakamisa iSkissor kabini
Itheyibhile yokuPhakamisa iSikere
I-Roller Scissor Phakamisa Itafile
Itheyibhile yokuPhakamisa iSikere esisezantsi
Iphrofayili ephantsi yeScissor Lift Table
Isikere esiCwangcisiweyo sokuPhakamisa itafile
Itheyibhile yokuPhakamisa iScissor yesiqhelo
Itheyibhile enzima yokuPhakamisa itafile
Iscissor esiphakamileyo esiphakamileyo
Iselfowuni esisiSciissor Lift
Ukuphakanyiswa kweSkissor epheleleyo
Ukuphakanyiswa kweSikere esincinci
Ukuphakanyiswa kweScissor esiSihambileyo
Ukuphakanyiswa kweSikere esiZenzekelayo
I-Hydraulic Drive Scissor Phakamisa
Ukuphakamisa ngombane iScissor Lift
Umhlaba oMbi we-Diesel Power Scissor Lift
Iplatifomu yoMsebenzi weAluminiyam
Iplastikhi eNye yeAluminiyam yeNdawo yokuSebenza
Iplatifomu yokuSebenza ngeAerial yeAluminiyam
Uqwalaselo oluphezulu lweMasta yeAluminiyam yeQonga loMsebenzi
Uqwalaselo oluPhezulu lweeNdawo eziMnyama zeAluminiyam zeNdawo yokuSebenza
Isikhokelo sokuPhakamisa iAluminiyam yeQonga loMsebenzi
Iplanethi yeAlfumini yeAluminium yeplanethi yoMsebenzi
Isikhethi seMida yoMbane
Isikhethi soMyalelo oZenzekelayo
Nkqo Cargo Phakamisa
Oololiwe abaBini abathe nkqo bokuPakisha imithwalo
Oololiwe abane abathe nkqo bokupakisha imithwalo
Ukuphakanyiswa kweBoom kuchazwe kwiDaxlifter yokuHamba
I-China ichazwe ngeTowable Boom Phakamisa iDaxlifter
Ukuphakamisa i-Boom Lift
Telescopic Boom Phakamisa Idizili yamandla eDaxlifter
Ukuphakanyiswa kweBoom ephakanyisiweyo
Ukuphakanyiswa kweTelescopic Boom Phakamisa
Ukuphakamisa isitulo esinamavili
Ukuma kwesitulo samavili esithe nkqo
Uhlobo lweSkissor Wheelchair Lift
Isikhululo seDock esiSelfowni
Indawo yokuma kweDock
China Isiko elenziwe ngeZithuba zokuPaka ezine zokuPhakamisa iDaxLifter
I-China Daxlifter Rotary Platform yokuPaka iimoto yokuPaka iMoto
Ukuphakamisa iZithuba ezimbini zokuPaka
Ukuphakamisa iZithuba ezine zokuPaka
Ukuphakamisa ukuPaka kwePost Post
Umgangatho weplate 2 yokuPhakamisa imoto
Cacisa uMgangatho 2 wokuPhakamisa iMoto
Inkonzo yeemoto Phakamisa iZithuba ezi-4 zeDaxlifter
Ukuphakamisa iMoto kuMgangatho weDaxlifter
I-China Daxlifter Super Profile ephantsi yokuPhakamisa isiXhobo seNkonzo yokuPhakamisa iiNkonzo
Isisisi esiShukumayo sokuPhakamisa imoto
Iscissor seMoto yokuPhakamisa umngxunya ngokuSebenza kokuPhakamisa kweSibini
I-Scissor Car Service Phakamisa iProfayili esezantsi yeDaxlifter
Ukuphakanyiswa kweMoto encinci yokuHanjiswa okuPhakathi kweDaxlifter
Isitaki sombane China Warehouse Handle Equipment Daxlifter
I-Crane Ivenkile yomgangatho
I-China Daxlifter yesiqhelo eyenziwe ngeNdlela yokuSebenza yeGlasi yokuPhakamisa iNdebe
I-China Daxlifter yezoQoqo zeTrolley Umshini ophakamisa iglasi
Iglasi yokufunxa iNdebe yeGlasi
Indawo yokuSebenza ePhakamileyo
Ukulwa iTraki yoMlilo
Amagwebu Umlilo Ukulwa Iinkuphelostencils
Amanzi Tank Umlilo Ukulwa Iinkuphelostencils
I-China Daxlifter yokuPhakanyiswa kweManyuwali yokuHanjiswa kunye nokuHamba kweTafile yeTafile yeTafile
Iphalethi yombane Iinkuphelostencils Kwinqanaba eliphezulu iDaxlifter
Isandla Setroli Pallet Iinkuphelostencils China Daxlifter Brand kunye Battery Power
I-China Daxlifter yesiqhelo eyenziwe ngeVilla Home Elevator
Iplatifomu yoMsebenzi weAluminiyam oziPhilayo
Imoto ekhethekileyo Isetyenziswa ngokubanzi kwimizi mveliso enzima ebandakanya indawo ephezulu yokusebenza ilori, umlilo wokulwa iinkuphelostencils, inkunkuma iinkuphelostencils njalo njalo.Here we recommend our aerial working truck and fire fighting truck first.
Isithuthi sokusebenza esiphakamileyo sinesibonelelo esingenakuthelekiswa nezinye izixhobo zomsebenzi womoya, oko kukuthi, sinokwenza imisebenzi yemigama emide kwaye sihamba-hamba kakhulu, sisuka kwesinye isixeko siye kwesinye isixeko okanye nakwilizwe. Inendawo engenakuphikiswa kwimisebenzi kamasipala.
I-Dongfeng 5-6 yeetoni amagwebu umlilo iinkuphelostencils ilungiswe kunye Dongfeng EQ1168GLJ5 chassis. Isithuthi siphela senziwa ligumbi lokukhwela abacimi-mlilo kunye nomzimba. Igumbi labakhweli lungumqolo omnye ophindwe kabini, onokuhlala abantu aba-3 + 3.
Amanzi ethu tanki lomlilo iinkuphelostencils ziguqulwe nge-Dongfeng EQ1041DJ3BDC chassis. Isithuthi senziwe ngamacandelo amabini: igumbi lokuhamba lomcimi-mlilo kunye nomzimba. Igumbi lokukhwela ligcwele umqolo ophindwe kabini kwaye unokuhlala abantu abangama-2 + 3. Imoto inesakhiwo setanki yangaphakathi.
Ilori yethu yenqwelomoya erhabaxa inezinto zayo1. I-boom kunye ne-outrigger zenziwe nge-alloy ephantsi ye-Q345 profiles, ngaphandle kwe-welds macala onke, intle ngembonakalo, inamandla amakhulu kwaye inamandla amakhulu; 2. H-ezimile outriggers abe uzinzo elungileyo, le outriggers unako ukusebenza ngaxeshanye okanye ngokwahlukeneyo, umsebenzi bhetyebhetye, kwaye uyakwazi ukuziqhelanisa ezahlukeneyo iimeko zokusebenza; 3. Isixhobo slewing isebenzisa uhlobo adjustable, nto leyo lula uhlengahlengiso; 4. I-turntable ijikelezisa i-360 ° kumacala omabini kwaye yamkela uhlobo oluphambili lwe-turbo-worm ye-deceleration mechanism (ene-self-lubricating kunye nemisebenzi yokuzivalela ngokwakho). Ulungiso lwasemva kwexesha lunokuphunyezwa ngokulula ngokuhlengahlengisa indawo yeebholithi; 5. Umsebenzi wokukhwela wamkela imo yokudibanisa ibhloko yolawulo lwevali, kunye noyilo oluhle, ukusebenza okuzinzileyo kunye nokugcinwa okufanelekileyo; 6. Ukuhla kunye nokungena kunxibelelene, umsebenzi ukhuselekile kwaye unokwethenjelwa; 7. Ummiselo wesantya esingathathwanga ufezekiswa ngevalve yentsimbi ngexesha lokusebenza kwebhodi; 8. Ingobozi exhonyiweyo isebenzisa intonga yokubopha yangaphandle yokulinganisa ngomatshini, ezinze ngakumbi kwaye ethembekileyo; 9. Ingobozi enamavili exutyiweyo okanye exhonyiweyo inezixhobo zokuqalisa kunye nokumisa, ezilungele ukusebenza kunye nokugcina ipetroli; Iilori zethu zokulwa umlilo zahlulwe zayilolona luthintela amagwebu kunye netanki lamanzi lokulwa umlilo. Itshintshiwe ukusuka kwi-Dongfeng EQ1168GLJ5 chassis. Isithuthi siphela senziwa ligumbi lokukhwela abacimi-mlilo kunye nomzimba. Igumbi labakhweli lungumqolo omnye ophindwe kabini, onokuhlala abantu aba-3 + 3. Imoto inesakhiwo setanki esakhelwe-ngaphakathi, icala langaphambili lomzimba yibhokisi yezixhobo, kwaye icala eliphakathi litanki lamanzi. Icandelo elingasemva ligumbi lokumpompa. Itanki ephethe ulwelo yenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu yentsimbi kwaye iqhagamshele kwi-chassis. Umthamo wamanzi wokuthwala amanzi ngama-3800kg (PM50) / 5200kg (SG50), kwaye umthamo wolwelo olugwebu ngu-1400kg (PM60). Ixhotyiswe nge-CB10 / 30 koxinzelelo oluphantsi oluveliswa yiShanghai Rongshen Fire Fighting Equipment Co, Ltd. Impompo yomlilo inendawo yokulinganisa eyi-30L / S. Uphahla luxhotyiswe nge-PL24 (PM50) okanye i-PS30W (SG50) yokubeka iliso kwimoto eveliswe yiChengdu West Fire Machinery Co, Ltd. Eyona nto inkulu kwimoto ngumthamo omkhulu wolwelo, ukulawula kakuhle kunye nokugcinwa ngokulula. Ingasetyenziswa ngokubanzi kwizikhuselo zomlilo ezikhuselekileyo, kwimizi-mveliso kunye nasemigodini, ekuhlaleni, kwizibuko ledolophu nakwezinye iindawo zokulwa imililo yeoyile enkulu okanye izixhobo zomlilo ngokubanzi. i-chassis ipasile ukuqinisekiswa kwemveliso esisinyanzelo kuzwelonke; ukukhutshwa kwe-injini kuyahlangabezana neemfuno zomda wesihlanu we-GB17691-2005 (umgangatho weSizwe V); sonke isithuthi sidlulile kuvavanyo lweZiko loMgangatho loVavanyo loMgangatho weZixhobo zoMlilo kunye neZiko lokuHlola (Ingxelo yeNombolo: Zb201631225 / 226) kwaye ibandakanyiwe kwisibhengezo seemveliso ezintsha zezithuthi nguMphathiswa Wezemveliso kunye neTekhnoloji yoLwazi.